दसैंमा मासु खाँदा के कुरामा ध्यान दिने ? - Dhangadhi Khabar
बुधबार २१, जेठ २०७७ १४:५७
दसैंमा मासु कसरी खाने र कस्तो मासु खाने जानकारी नहुँदा मानिसहरु बिरामी हुने गरेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । दसैंमा मासु र मासुजन्य वस्तुहरु खाँदा यसमा धेरै ध्यान पुर्याउनु पर्ने मुटु रोग विशेषज्ञ डा. भवानी मानन्धर बताउँछिन् ।
सोमबार २०, असोज २०७६ ०१:३९ मा प्रकाशित
मिसाएर खान नहुने १० खाने कुरा
दहीसँग झुक्किएर पनि नखानोस् यी चिज
धनगढीमा रेष्टुरेन्ट व्यवसायमा लगानी बढ्दै, फेरि नयाँ रेष्टुरेन्ट खुल्यो